इजरायलमा कट्टरपन्थी यहुदी नेता बेन आरी माथि प्रतिबन्ध - Tamang Online
ट्याक्सी चढ्ने हो ? अब ५ मिनेटमा घरमै लिन आउँछ इजरायलमा नेपाली दुतावासले २५६३ औं बुद्ध जयन्ती मनाउने,नेपाली समुदायको संघसंस्थालाई सहभागी हुन आव्हान प्रधानमन्त्री ओली र इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु बीच टेलिफोन वार्ता श्रीलंका बम विस्फोटमा परी ५० को मृत्यु ,दुई सयभन्दा बढी मानिसहरु घाइते भारतीय दूतावासद्वारा तामाङ वस्तिमा रहेको छ्योइफेल गुम्बाको पुनर्निर्माण ह्योल्मो समाज इजरायलले बार्षिक उत्सव तथा साधारण सभाको साथमा २५६३ औं बुद्ध जयन्ति मनाउने तयारी कुलमान घिसिङको निर्देशन ‘ट्रेड युनियनको चुनावमा गाडी नदिनु’ स्वयम्भू र हनुमानढोका जोड्ने गुरुयोजना सार्वजनिक महिलालाई चरित्रहीन भनेपछि बुद्धले मुखियाको एक हात समातेर बजाउन लगाए ताली विप्लव समूहलाई नेपाल बन्द फिर्ता गर्न तामाङ घेदुङको माग दोलखाको शैलुङमा हजारौं पर्यटक इजरायलको टिकट काटेकी सुनिताको घरमा ‘अवैध प्रेमी’को लास नेपाली युवतीलाई केन्याको डान्स बार पुर्याउने मानव तस्करी पक्राउ अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार मञ्च इजरायलले नयाँ बर्ष २०७६ भव्यताको साथ मनायो नेपाल, भारत र चीनकी चेलीले एकसाथ सगरमाथा चढ्ने
इजरायलमा कट्टरपन्थी यहुदी नेता बेन आरी माथि प्रतिबन्ध
जेरुसेलम । इजरायलको सर्वोच्च अदालतले यहुदी शक्ति पार्टीका कट्टरपन्थी नेता बेन आरीलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ ।
यो सँगै अब उनले आगामी महिना हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । आफ्नो फैसलामा सर्वोच्चले निर्वाचन समितिको निर्णय पनि उल्टाइदिएको छ ।
इजरायलमा बसिरहेका अरब मूलका नागरिकका बारेमा गरेका टिप्पणीका कारण उनको आलोचना भइरहेको छ ।इजरायलका महान्यायधीवक्ता जनरल अभिचाई मेडेलब्लिटले उनको टिप्पणी नस्लवादबाट प्रेरित रहेको बताएका छन् । अदालतले इजरायलको अरब पार्टीलाई पनि चुनाव लड्न अनुमति दिएको छ ।
इजरायलमा ९ अप्रिलमा चुनाव हुदैछ । अरब पार्टीमाथि इजरायल र इजरायली सैन्य बलविरुद्ध गरेको आलोचनात्मक टिप्पणीका कारण चुनाव लड्न रोक लगाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले चुनावभन्दा पहिले केही कट्टरपन्थी विचारधाराका पार्टीसँग गठबन्धन गरेका छन् । नेतान्याहूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन भइरहेको छ । यद्यपि यो निर्वाचनमा पनि उनको लिकुड पार्टीको दाबेदारी बलियो मानिएको छ ।
इजरायलमा गठबन्धन सरकार बन्ने गरेको छ । किनकि आनुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाअनुसार कुनै पार्टीले एक्लै सरकार बनाउन सक्दैन ।
वामपन्थी नेताले अदालतमा दायर गरेको आफ्नो अपिलमा बेन आरीले नस्लवादी बयान दिएको बताएका थिए । द टाइम्स अफ इजरायल बेवसाइटका अनुसार निवेदनमा उनले अगस्ट २०१८ को एक भनाईको जिकिर गरिएको थियो ।
जसमा आरीले भनेका थिए, ‘हामीले कुनै यहुदीविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्नेसँग समीकरण बदल्नुपर्छ । यस्ता व्यक्ति मृत्यु भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनीहरु जिउँदो रहनु हुँदैन । उसलाई देश निकाला गर्ने वा नागरिकता लिने होइन, जिउँदो नै रहन हुन्न । अरब यही भाषा बुझ्छ ।’
पछि उनले यसबारेमा स्पष्टिकरण दिँदै आफ्नो भनाई हमासप्रति लक्षित रहेको बताएका थिए ।
« कमरेड विप्लवलाई खुलापत्र – जनताको जिउधनको रक्षा होस् ! (Previous News)
(Next News) नेपाल तामाङ घेदुङ इजरायलको पाँचौ अधिवेशन मे महिनामा हुदै »
समुद्रमा खस्यो जापानको लडाकु विमान
ट्रम्पले प्रवासीलाई भने– हाम्रो देश खाली छैन, फर्केर जाऊ
इत्साक खायिक: ७३ वर्षको उमेरमा बने यी इजरायली सबैभन्दा वृद्ध फुटबल खेलाडी
युक्रेनको राष्ट्रपति निर्वाचनमा हाँस्य कलाकारको अग्रता !
ट्याक्सी चढ्ने हो ? अब ५ मिनेटमा घरमै लिन आउँछ
याम्बु - उपत्यकामा गुड्ने ट्याक्सी चढ्न परे अब ‘ए ट्याक्सी’ भनेर बोलाइरहनै... बाँकी यता